mushaTURKEYDunhu reMarmara34 IstanbulCrazy Projects Mutengo 320 Bhiriyoni Lira
13 / 01 / 2020 34 Istanbul, GENERAL, Airports, hyperlinks, HIGHWAY, musoro wenyaya, Dunhu reMarmara, TURKEY
The Mari yaidiwa kuvaka bhiriyoni nepondo anopenga
Mutungamiri Tayyip Erdoğan 'kupenga chirongwa' sezvakatsanangurwa muchirongwa chechiteshi muIstanbul apo simba reFatih Project mumakore achangopfuura, Yavuz Sultan Selim Bridge, Osmangazi Bridge, airport ye3 uye zvipatara zvemuguta zvaive pasi pechionekwa. Mari yakakwana yekudyara mashanu yaive mazana mazana matatu emapaunzi.
Oguz Gundogdu kubva Birgün'ünKuongorora mapurojekiti mashanu akacherechedzwa mumakore apfuura achitevera Kanal Istanbul ajenda. Zvirongwa zvakaunzwa nemazita akadai se 'chirongwa chezana rino ramakore' zvakanyorwa sezvizvi:
Fatih Project yakavambwa muna 2010 uye yakaparura mabhirioni mazana masere nemazana mashanu emapaunzi. Zvinoenderana nehurongwa uhu, vadzidzi vese vemunyika vanodzidziswa nemapiritsi mukati memakore mana. Rally makwere "chirongwa chezana rino," akaunza chirongwa akatanga kuuya kuchirongwa nemari isingawanzo kubhadharwa. Zvino, munaGunyana 8 Birol Ekici, mutevedzeri wemisangano ye Ministry of National Education, akadzingwa. Iyo projekiti, iyo inofanirwa kupedzwa muna 500, yakawedzera muna 4 kusvika 2013. Kubva musi wa2014 Ndira 2015, zvakanzwisiswa kuti kosi yemakomputa iyi yakaitirwa mumakadhibhodi muDiyarbakır.
Bosphorus Bridge, iro rakavhurwa muna 1974, raida zviuru mazana maviri emadhora uye Fatih Sultan Mehmet Bridge, iro rakavhurwa muna 21, richitenga madhora mazana maviri nemakumi mashanu emadhora, nepo 1988rd Bridge rakavakwa nemadhora mazana matatu emadhora. Nekudaro, hafu yezvikamu zvebhiriji zvakaendeswa kuChinese makumi matanhatu nemakumi matanhatu emadhora. 'Mapuru eruzhinji haazobuda mune imwechete peni' inonzi chirongwa ichi mushure mekuvhurwa kwemutoro webhajeti nguva pfupi mushure mekuvhurwa kwanzwisiswa. Sekureva kwemhinduro yeGeneral Directorate ye Highways, Honional Adıgüzel, CHP, zviuru makumi mana nemakumi masere nemakumi mapfumbamwe nemakumi masere emotokari dzakapfuura kubva ku125rd Bridge, iri 3 zviuru zvemotokari pazuva, kubva munaGunyana 3 kusvika June 658. Nekudaro, kunyange chetatu chewarandi yemotokari yakapihwa pedyo nemakore matatu aisakwanisa kusvika. Kubva iwo mutengo webhiriji kubva kuvhurwa kwemamirioni 135 emapaunzi pazuva pazuva pakati.
Ndege yechitatu yakavhurwa muna Gumiguru 29, 2019 yakakonzera kuvharwa kweAtatürk Airport. Kuvhara uku kwakamhanyiswa kuAtaturk Airport kusvika munaJanuary 3, 3 kuti ushande iko kurudyi kuTAV mamirioni mazana mapfumbamwe nemakumi matatu nemashanu euros achabhadharwa mubhadharo wakanzwisiswa. Hamdi Topçu, mutungamiri weTurkey Airlines pakati pa2021 na389, mubhuku rake 'Kubva kuMunharaunda kusvika kuGlobal', zvaizokwana kusvika 2010 kana imwe runway yakange yakavakirwa kuAatatrrk Airport.
Osmangazi Bridge kune kambani inoshanda yakapihwa vimbiso yekuchinja kwemotokari mukuchinjana kwemadhora yakanzwisiswa. Otoyol AS general maneja Bülent Esendal, uyo anomhanyisa bhiriji rekubhadhara mari yechibatiso, iro rinowedzerwa nezvikamu makumi mashanu neshanu pavanopinda muna 2019, akataura kuti havakwanise kuchinja mutero nekuda kwemusiyano pamwero wedhora. Bhiriji rekudonha kwemotokari muna 50 raive makumi manomwe nematanhatu emapaunzi, apo huwandu uhwu hwakawedzera kusvika pamapaundi zana nemakumi matatu nemakumi matatu nemakumi mapfumbamwe nemakumi maviri nemapfumbamwe muna 2018. Zana 72 chete, mutengo weOsmangazi uye Yavuz Sultan Selim Bridges kubhajeti ndeye 2019 bhiriyoni TL maererano neruzivo rwakapihwa negurukota rezvekufambisa Cahit Turhan. Huwandu uhu hunenge hwakapetwa ka103 kubvumidzwa kwemutungamiri wenyika muna 2020.
Iro City Hospitals chirongwa chakaunzwa kune vanhu muna 2017. Mutungamiri Erdoğan vakapika zvipatara zvemuguta vachiti, "Kurota kwangu kwamakore gumi nematatu ndiko chirongwa chandirikuda." Muna 14 na2018, zvipatara zvemuguta, izvo zvakavhurwa imwe mushure meimwe, zvakavhurwa bhajeti munguva pfupi like mamwe mapurojekiti anopenga. Pakupera kwegore ra2019, mutengo wemakore makumi maviri neshanu wezvipatara zvemuguta mukushandira unopfuura mabhiriyoni gumi nemana emadhora. Mari iyi yakakura zvakakwana kupa mari kuvakwa kwezvipatara mazana masere. Kutsoropodzwa munzeve ichibatanidza simba, zvino, "ipapo, kukuvara," akaenda achiti. Gurukota rezvehutano, Fahrettin Koca, akataura nezvenyaya iyi musi waNovember 2019, 25 achiti: "Semaonero edu, zvipatara hazvisi zvekutengeserana asi rendi yatinobhadhara, hatifanirwe kubhadhara here?
Cyprus mvura mutsetse chirongwa
envisaging urongwa mvura Turkey uye Northern Kupro "chirongwa remakore" anonzi kuvhurika chirongwa yakaitwa musi waOctober 17, 2015. Mutungamiri Recep Tayyip Erdogan uye Mutungamiri Ahmet Davutoglu vakapinda mabiko aya kuMersin. Davutoğlu akatsanangura chirongwa ichi seyero basa renyika dzese, ndokuti, uz Tiri kuvaka bhiriji remvura rakaisvonaka pasi rose. Inyika nezvose, uye chizvarwa nezvose .. Ichipedzisa mukutarisirwa kwekukurukurirana, basa rakaputika, nekukurumidza semakore mashanu. Mamaira mashanu kubva pamhenderekedzo yeAnamur yakaputika mapaipi akaputika. Inenge 5 mapaipi akadzika mapaipi anogona kuonekwa kubva pasi pegungwa. Kune mvura inoyerera kubva pamapombi. Iyo purojekiti yakanga yaita mabhiriyoni 5 emapaunzi.
The zvachose mubhizimisi Mari pondo mabhiriyoni 320
Investment mutengo: mabhiriyoni 8,5 pondo
2-Sultan Selim zambuko:
Investment mutengo: mabhiriyoni 3,5 euros
Nhasi india: mabhiriyoni 23,5 pondo
3- Osmangazi zambuko:
Investment mutengo: mabhiriyoni 2,5
Nhasi india: mabhiriyoni 17 pondo
4- 3 dzendege:
Investment mutengo: $ 35 billion
Nhasi india: mabhiriyoni 206,5 pondo
5- 20 zvipatara guta:
Investment mutengo: $ 11 billion
Nhasi india: mabhiriyoni 64 pondo
Izvo zvinodhura zvemapurisa zvinodonha nekudonha
1 Mutengo wegore negore weOsmangazi Bridge kuHaimari 1.3 Bhiriyoni Lira
2018 Ive Ive Gore Rokuita Kwemapanga
Dhizha rakangwara, kwete chikafu
Mari yeBaşkentray Project 600 Million Lira
Ivhareji yezuva nezuva ye Osmangazi Bridge kuhurumende yaiva 3 mamiriyoni mapaundi
320 tram 4 bhazi yakashanda panguva imwe chete, yakapfuura nyika mabhuku
Ziviso yeTender: Kuisa, kuturunura 320.000.pcs concrete traves pakati pePolatlı neSincan…
320 zviuru zvitanhatu zveasphalt akakandwa mumudonzvo
2019-2020 Metrobus Fee Yakawanda Sei Lira ..? Metrobus Magetsi Tiketi YeMagetsi Mangani Lira ..?
Mutengo weEurasia Tunnel 1,2 madhora emadhora
3. mari yepamhanda metro metro ichasvika 5 mabhiriyoni TL
Ankara-Izmir High Speed ​​Train Project inodhura 4.2 mabhiriyoni TL
3. nhandare yendege
Mari Crazy Project
Mutengo weIstanbul Airport
Mari Osmangazi Bridge
Mari Yavuz Sultan Selim Bridge